Mitarika 54,85% Dr Robinson, HVM : 45,15% – MyDago.com aime Madagascar
Mitarika 54,85% Dr Robinson, HVM : 45,15%
5 réflexions sur « Mitarika 54,85% Dr Robinson, HVM : 45,15% »
Comment rebouchonner le champagne
maninona isika tarabe @ isan’ny BVs voaray, CENI-T efa tonga 7007BVs zao, sa tsy maharaka ny hélico-tsika? Sa isika mila manao recoupement bebekokoa noho CENI-T, dia tena azo antoka ireo, azo entina hatrany @ mpitsara?
Tokony hanao hetsika sy hanaramaso ny fisan’ny CENI-T ny ankolafy Ravalomanana sy ny Avana fa tsy miteny fotsiny. ny CENI-T ity mandroso ihany dia ny mpanomgam-panjakana hisa hoan’ny frantsay no handray ny fitondrana eo.
24 décembre 2013 à 10 h 19 min
Toa izany koa, azafady, mba jereo kely ilay forum, lazaina fa an’i dada sy neny nefa misy olona tafiditra tsy manao afa-tsy ny manimba izay voalazan’ny kandida JLR, mihantsy ady ary milaza mihintsy ny handoro velona ny lehiben’ny CES.
toa izao, ohatra no hita ao:na entina hatezerana aza io Nay io, mila tandremana ihany izay soratana, ka mila miasa mafy ny webmaster:
15 millards no omen Andry an i CES. OMALY
Envoyé par: Nay (Adresse IP journalisée)
Date: mar. 24 décembre 2013 05:13:19
Tena marina ity, navoakan’ny mpitsara fa 15miliara no tambazan’i joel an’i FRANCOIS; ka eto dia mampitandrina izahay, fa tsy hivoaka velona eto nareo CES raha milaza lainga mampandresy ny FOZA fa doranay velona
29 mai 2014 à 19 h 09 min
I like this chick and am thrilled to hear a poatneitl release date but I can’t believe that anybody in their right mind would even consider sending any movie starring Robert Pattinson straight to DVD in 2011. Obviously it can’t bank like Twilight or even WFE but there HAS to be money to be made in theaters.
Précédent Article précédent : DR ROBINSON : MANGATAKA NY HANAJANONANA NY FANISAMBATO HO ANY FIFIDIANANA FILOHAMPIRENENA
Suivant Article suivant : Résultat 2è tour : ( bv 4996/20 001 ) JLR: 54,93 %, HVM : 45,07 %